४ Archives • Page2of 594 • Nepal's Trusted Digital Newspaper४ Archives • Page2of 594 • Nepal's Trusted Digital Newspaper
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार धनराज आचार्यले अग्रता कायमै लिनुभएका छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार सत्तागठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिनुभएका एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले २१ हजार ८ सय ८० मत प्राप्त गर्नुभएकाे छ। ५२ हजार ८ सय १७ मत गणना हुँदा आचार्यले २१ हजार ८ सय ८० मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन […]
बागलुङमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा जम्मा २ जना मात्र महिला निर्वाचित
बागलुङ । १० वटा स्थानीय तह रहेको बागलुङमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा जम्मा २ जना मात्र महिला निर्वाचित हुनुभएकाे छ । बडिगाड गाउँपालिकामा निर्वाचित गण्डकी थापा जिल्लाकै एकमात्र महिला पालिका प्रमुख हुनुहुन्छ । त्यसैगरी तमानखोला गाउँपालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित हिरा कुमारी छन्त्याल एकमात्र पालिका उपप्रमुख हुनुहुन्छ । ४ सय ४५ जना जनप्रतिनिधिको लागि भएको स्थानीय तह […]
गोरखा । गोरखा आरुघाटकी पूर्णिमा श्रेष्ठले ११ दिनको फरकमा विश्वका तेस्रो र चौथो अग्लो शिखर चुम्नुभएकाे छ। वैशाख २३ गते पूर्णिमाले कञ्चनजंघा (८,५८६ मि.) र मंगलबार ल्होत्से (८,५१६ मि.) हिमालको सफल आरोहण गर्नुभएकाे हाे। मुलुकको ध्यान स्थानीय चुनावमा केन्द्रित भइरहेका बेला फोटो पत्रकारसमेत रहनुभएकी श्रेष्ठ भने हिमाल आरोहणमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यसअघि उहाँले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा […]
‘स्वास्थ्यका क्षेत्रमा देखिने गरी काम गछौं’ भरत कोइराला, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बुधबार पोखराको हरियोखर्क अस्पतालको अनुगमन गर्नुभएकाे छ । इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिपद्वारा विसं २००९ सालमा पोखरामा स्थापित यो अस्पतालले हाल विशिष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले ७० वर्ष पहिला कुष्ठरोगको उपचारका लागि खुलेको अस्पतालले निरन्तर सेवा प्रदान […]
पोखरा । नेकपा एमालेबाट कास्कीको मादी गाउँपालिका अध्यक्ष उम्मेद्वार शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र)ले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङको राजीनामा माग गर्नुभएकाे छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उपकुलपति बनेको डा. जगमान आफूलाई हराउन विपक्षी पार्टीका उम्मेद्वारलाई मत माग्दै हिँडेको भन्दै महेन्द्रले राजीनामा माग गर्नुभएकाे हाे । मादी १० भाचोकमा बुधबार […]